Zaw Min Oo (ဇော်မင်းဦး) - Myanmar Idol Song Collections - Mg Shan Lay
High Quality MP3 သီချင်းများကို စုစည်းထားသ​​လောက် တင်​ပေးထားပါသည်။ အ​ဝေး​ရောက်သူများ နှင့် သီချင်း​ခွေဝယ်ရန် အခက်အခဲ ရှိသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ သီချင်းချစ်သူများ အဆင်​ပြေပါ​စေခင်ဗျား။
Home Myanmar Idol Song Collections Zaw Min Oo ဇော်မင်းဦး Zaw Min Oo (ဇော်မင်းဦး) - Myanmar Idol Song Collections
Zaw Min Oo (ဇော်မင်းဦး) - Myanmar Idol Song Collections
10:15:00 AM Myanmar Idol, Song Collections, Zaw Min Oo, ဇော်မင်းဦး,
Top5Competition
သီးသန့်သီချင်း - Idol Accoustics Album
Download Collections Here !
Tags # Myanmar Idol # Song Collections # Zaw Min Oo # ဇော်မင်းဦး
About Shan Lay
at 10:15:00 AM
Labels: Myanmar Idol, Song Collections, Zaw Min Oo, ဇော်မင်းဦး
Mingalar Par !
Mingalar Par ! @ မင်္ဂလာပါ
High Quality MP3 သီချင်းများကို စုစည်းထားသ​​လောက် တင်​ပေးထားပါသည်။ အ​ဝေး​ရောက်သူများ နှင့် သီချင်း​ခွေဝယ်ရန် အခက်အခဲ ရှိသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ သီချင်းချစ်သူများ အဆင်​ပြေပါ​စေခင်ဗျား
Pls Like My Page
G Fatt - Collections 2015
Credit - Myanmarmp3lyrics No. Song Title Download 1. ပြည်ပသို့ပေးစာ Downlo...
Wai La (ဝေလ) - A Di Pa Ti Phwar (အဓိပတိဖွား) [2016 Album] (Mp3 320Kbps!) Download Link Update! + Song Booklet
Wai La (ဝေလ) - A Di Pa Ti Phwar (အဓိပတိဖွား) [2016 Album] (Mp3 320Kbps!) ၃၆၀ [Feat.ပိုပိုဟေသာ] လွယ်လွယ်လေးရခဲ့တော့ နင်သိပ်ရပ်စ...
Shwe Htoo - စိတ်ကူးယဉ်စာအုပ် [2016 Album] (MP3 320Kbps!)
Shwe Htoo - စိတ်ကူးယဉ်စာအုပ် [2016 Album] (MP3 320Kbps!) No. Song Title 1. တံခါးဖွင့်ထားပါတယ် ...
​ဝေလ - မချစ်ရဘူးတဲ့လား [2015 Mini Album] M4a & MP3 320Kbps ! [Update ! Download Link]
​ဝေလ - မချစ်ရဘူးတဲ့လား [2015 Mini Album] M4a & MP3 320Kbps ! No. Song Title Download 1. မချစ်ရဘူးတဲ့လား M...
G Fatt - ပြည်ပသို့ပေးစာ 2015
No. Song Title Download 1. ပြည့်ပသို့ပေးစာ - G Fatt Download ...
Archive June 2017 (13) April 2017 (3) March 2017 (17) February 2017 (3) October 2016 (7) September 2016 (22) August 2016 (9) July 2016 (8) June 2016 (17) May 2016 (5) March 2016 (1) February 2016 (13) January 2016 (2) December 2015 (2) November 2015 (8) October 2015 (17) September 2015 (6) August 2015 (5) July 2015 (14) June 2015 (13) May 2015 (8) February 2015 (2) January 2015 (2) December 2014 (3) November 2014 (2) October 2014 (17) September 2014 (36) August 2014 (35) July 2014 (82) June 2014 (157) May 2014 (26) December 2012 (1)
192 Kbps! (13) 320 Kbps! (179) Andriod Applications (27) Asian Songs (19) Classical Songs (6) EP (1) International Songs (62) Mini Album (9) Mixtape (5) Single (113) Song Collections (26) Various Artists (52) Windows (4) သင်္ကြန်သီချင်းများ (5)
၀င်းလဲ့သူ (2) ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း (15) Ah Moon (1) AuRa (1) Aye Chan May (1) Aye Mya Aung (1) Ban Thord Kyin (1) Bigg-Zee (1) BLESSING (1) Bobby Soxer (14) Candy (1) Cha Cha (1) Eaint Chit (1) Emily မောင် (1) Htike Htike (3) Htun Eaindra Bo (1) Jenny (1) Jessica Da Da (1) Jewel (1) Li Li Myint (1) Lဆိုင်းဇီ (8) Main Main (1) Mariah Carey (1) May Kyi (1) Mi Sandi (4) Moe Pyae Pyae (1) Ni Ni Khin Zaw (1) Ninzi May (1) NOV 24 (1) Nကိုင်ရာ (2) One One (1) Po Po (1) Shin Phone (1) Shwe Yi Phyo Mg (1) Sophia Everest (5) Su Sandi (1) Su Sandi Htun (2) Supermodels (5) Thet Su Nadi (1) Tin Zar Maw (2) Wyne Lay (2) YAK (1) Ywal Ywal (3) ကက်သရင်းမီးမီး (1) ခင်စုစုနိုင် (8) ခွန်းဆင့်​နေခြည် (1) ချစ်စနိုးဦး (1) ချစ်သုဝေ (2) ချမ်းချမ်း (15) ဂျင်းနီ (2) ဂျနဗီ (1) ငယ်ငယ် (1) စိမ်းမို့မို့ (4) စိုးပြည့်ပြည့်စံ (1) စိုးပြည့်သဇင် (2) စန္ဒီ(၁၅၀၀) (1) စန္ဒီမြင့်လွင် (6) စန္ဒီမြင့်လွင် (5) ဆိုင်စံ (1) ဆိုတေး (6) ဆုန်သင်းပါရ် (5) ဆူးဆူးဇော်ဝင်း (1) ဆူဇီ (1) ဆူးလေး (1) ဇမ်နူး (2) တင်ဇာမော် (4) တွယ်တာ (1) ထွန်းရတီ (4) ထွန်းအိန္ဒြာဗို (6) ထိုက်ထိုက် (2) ဒိုရေမီ (1) ဒီးဒီး (2) နင်ဇီမေ (2) နန်းခင်​ဇေယျာ (1) နန်းဆုရတီစိုး (1) နန်းသီရိမောင် (2) နီနီခင်ဇော် (5) နန္ဒာ (1) ပန်း​ရောင်ခြယ် (3) ပိုပို (7) ပိုပိုဟေသာ (4) ဗန်သော့ဒ်ကျင်း (1) ဗန်းသောဒ့်ကျင်း (2) ဗန်းသောဒ့်ကျင်း (1) ဖြိုးသီရိခေတ် (1) ဖြိုးသီရိခေတ် (1) ဘယ်လ်ခွန်းရီ (3) ဘာဆို​ဂေး (1) မင်းမြတ် (1) မင်းမော်ကွန်း (1) မယ်လိုဒီ (1) မိစန္ဒီ (12) မိန်မိန် (1) မို့မို့ (4) မို့မို့လွင် (1) မိုးဈာန် (1) မိုးပြည့်ပြည့် (1) မီးနို (1) ယဉ်နွယ်ဦး (1) ယုဇန (1) ယုန်လေး (3) ဖြူဖြူကျော်သိန်း (8) ရတနာမိုင် (5) ရွယ်ရွယ် (1) ရှင်ဖုန်း (3) လိမ္မော်သီး (2) လီလီမြင့် (1) လုံးလုံး (1) ကြိုးကြာ (3) သက်ဆုနဒီ (1) သဇင်သင်း (1) သံသာဝင်း (1) သဉ္ဇာကျော် (1) သီရိဆွေ (5) သန္တာဗိုလ် (1) အမွန်း (5) အားဝေ (1) အိန်အိန်း (1) အိမ့်ချစ် (20) အိမ့်ချစ် (4) အိမ့်ဖူးသော် (1) အိန္ဒြီကို (1) အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် (6) အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် (6) ဧကရီမှူးပိုင် (1) ကေကေ (1) ကေကေမိုး (1) ခေမာ (1) ချောငယ် (1) ဂေဂေး (3) ဂျေညီမလေး (1) ​မေခလာ (1) မေဆက် (1) မေဆွိ (1) မေကြည် (1) မေဖြူဖြူ (1) မေသက်ခိုင် (1) ​မေသင်ချို​ဆွေ (1) မေသူခိုင် (1) ရေဗက္ကာဝင်း (2) ​ရွှေရည်ဖြိုး​မောင် (3) ဟေမာနေ၀င်း (1) အေးချမ်းမေ (1) အေသင်ချိုဆွေ (5) နှင်းထွဋ်ဆွေ (1) နှင်းအဉ္ဇလီ (2)
၀န (5) ၀ိုင်ဝိုင်း (10) Ah Boy (1) Aik Nok (1) Antibiotic (1) Ar-Boy (2) Ar-T (12) ASH (4) Aung Htet (1) Aung La (1) Aung Pai Thant (1) Aung Phyoe (1) Aကရာဇ် (1) Aနွန် (1) Big Bag (12) Bigg-Zee (1) Black Hole (1) Black T (1) Bo Lay (1) Bunny Phyoe (11) Byu Har (1) C-Hokker (1) Chan Aye Win (1) Chit Soe (1) Cobra (1) Cyclone (1) Demojacktoo (1) Dilar (1) Dယံ (2) El P (1) G Family (1) G Fatt (8) G-Tone (2) Gip Gip (1) He' Lay (2) HEMALE (1) Hip2(1) Hlaing Oo Maw (1) Hlwan Paing (2) Htay Lin (1) Htet Yan (6) Htone Gyi (1) Idiots (4) J Me (18) J Mg Mg (1) Khant Phyo (1) Khin Maung Htoo (1) Ko Aung (1) KO THU (1) L D Kyaw (1) L D ကျော် (2) Leo (1) Lil Chan (3) Lil Z (12) Lily Tale (1) Linn Loon (1) Lu Khit (2) Lu Lay (1) Lu Lin Pyo (1) Lynn Khit (1) Lကို (1) Lလွန်းဝါ (8) Ma Nor (2) MC Bay Gyi (2) MC ဝေမှူး (1) Mg Thiha (2) MHL (4) Moe Z (1) Mung San Aung (1) Mဇော်ရိန် (1) Nay Tham (1) Nine One (1) Ninzi May (1) No U Turn (1) NOV 24 (1) Nyan Htet (1) Oakgar (1) Oasix (4) Owen (1) Ozzy Lynn (1) Phoe Aung (1) Phyoe Pyae Sone (3) Pi Si (1) Pyi Thar (1) Reason (3) Riff Raff (1) Rron (1) Rကာ (1) Rဇာနည် (16) Sang Pi (1) Saw Lar Htaw War (2) Shwe Htoo (5) Si Thu Lwin (1) Sithu Min (1) SIX THU (DIRTY CAT) (1) Snare (7) Soe Gyi (4) Soe Thu (1) SoLoZ (1) Tay Za MC (3) Thar Gyi (1) Thar Thar (1) The Ants (1) The Edge (1) The Key (2) The Marionette (1) V No Tun (1) VIRGO (1) Wai La (6) ​Wai လျှံ (1) Wanna (1) Wanted (3) Win Htet CyberZ (1) X Box (12) Yae Yint Aung (1) Yair Yint Aung (2) Yan Shin Tant (1) Yung Phyo (1) Zaw Min Oo (1) Zay Ye` (2) Zico (2) Zing (1) ကိကိ (2) ကိုကိုမောင် (1) ကိုင်ဇာ (1) ကိုမောင်မောင် (1) ကိုအောင် (1) ကျား​ပေါက် (2) ခင်မောင်တိုး (6) ခင်​မောင်ထူး (1) ခန့်ဖြိုး (1) ခုပ်ပီး (1) ချင်းလေး (1) ချစ်ကိုကို (1) ဂရေဟမ် (5) ဂျက်ဆန်ထွန်း (3) ဂျက်မြသောင်း (2) ဂျီလတ် (4) ဂျူဝယ် (1) ငယ်ငယ် (1) စည်သူလွင် (9) စံပီး (1) စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် (7) စိုင်းဆိုင်မောဝ် (2) စိုင်းလိက် (2) စိုင်းလိတ် (1) စိုင်းလေး (1) စိုင်းအောင်ထီးခမ်း (1) စိုးဖြိုး (1) စိုးကြီး (7) စိုးသူ (2) ဆင်ပေါက် (1) ဆိုတေး (6) ဇင်ဗိုလ်ထက် (1) ညလင်းထယ် (1) ညီမင်းခိုင် (3) ညီ​အောင် (1) ထက်ယံ (5) ထက်နေကြည် (2) ထွဏ်းထွဏ်း (1) ထွန်းထွန်း (1) ထိုက်ထိုက် (2) ထုံကြီး (1) ထူးအယ်လင်း (1) ဒိုးလုံး (1) ဒီးဒီး (2) ဒီးလာ (1) နံရိုး (1) နန္ဒစိုင်း (2) နန္ဒဧရာ (2) နန္ဒာ (1) ပိုပို (7) ပူစူး (3) ဖိုးကာ (3) ဖိုးသား (1) ဖိုးအောင် (1) ကြက်ဖ (5) သြရသ (2) ဗညားဟန် (3) ဗာဂို (1) ဗျူဟာ (1) ဖြိုးကြီး (2) ဖြိုးကျော်ထိုက် (1) ဖြိုးပြည့်စုံ (4) ဖြိုးကြီး (5) ဖြိုးကျော်ထိုက် (1) ဘရိတ်ကီ (1) ဘာဆို​ဂေး (1) ဘိုဘို (2) ဘိုဘိုဟန် (2) ဘိုဖြူ (2) ဘူးသီး (1) မင်းမြတ် (1) မင်းရံ (1) မင်းမော်ကွန်း (1) မင်းသွေး (1) မာရဇ္ဇ (2) မိုးဈာန် (1) မိုးယံဇွန် (1) မုန်ဆန်အောင် (1) မနော (5) မဲလေး [G3] (1) မျိုးမင်းကိုကို (1) မျိုးကြီး (17) မျိုးကျော့မြိုင် (2) ယုန်လေး (3) ပြည့်စုံ (1) ဖြိုးပြည့်စုံ (1) ရင်ဂို (4) ရန်ရန်ချမ်း (2) ရသ (6) ရိန်မိုး (1) ရဲရင့်အောင် (1) ရဲလေး (7) ရှိုင်းဝေယံ (1) လင်းနစ် (1) လင်းပင်ဟိန်း (3) လင်းလင်း (8) လင်းလွန်း (1) လင်းခေတ် (1) လန်ဘား (1) လုလင်ပျို (1) လူခေတ် (3) လူလေး (1) လွှမ်းပိုင် (15) သက္ကရာဇ် (1) သအို (6) သားဂန်း (1) သားစိုး (1) သာဒီးလူ (1) သားဖြိုး (1) သားကြီး (10) သားသား (6) သိန်းလင်းစိုး (3) သူထူးစံ (1) ဟန်ထွန်း (6) ဟိဏ်းသစ် (2) ဟဲလေး (1) အငဲ (14) အစ္စဏီ (3) အစိုင်း (4) အနဂ္ဂ (3) အနဒဗ (1) အမွန်း (5) အယ်မိုး (1) အယ်လ်ပီ (1) အယ်နောင်း (1) အိုင်နော့ (1) အဲလက်စ် (4) ဥက္ကာမင်းသာ (1) ဥဂ္ဂွါ (1) ဥာဏ်လင်းအောင် (5) ဝေမိုး (1) ဝေလ (1) ကောင်းဆက် (1) ကောင်းမြတ်စံ (1) ကောင်းကောင်း (2) ကေကေတီ (3) ကျော်ထွဋ်ဆွေ (13) ကျော်သီဟ (1) ဂျေဂျူး (1) ဂျောက်ဂျက် (1) ဂျေမောင်မောင် (2) ​စေလိုင်း (1) စောဘွဲ့မှူး (1) စောလားထော်ဝါး (3) ဆောင်းထန် (1) ဇေရဲ (1) ဇော်ဝင်းထွဋ် (3) ဇော်ပိုင် (1) ဇော်မျိုးထွဋ် (1) ဌေးလင်း (1) နေတိုး (1) နေထူး (1) နေမိုးစက် (1) နေသန် (1) နေဦးကိုကို (1) နောနော် (1) နေဇော် (1) နေနေ (7) ​မေခလာ (1) မေဆက် (1) မေဆွိ (1) မောင်မောင် (1) မောင်မောင်ဇော်လတ် (1) ​ရေမွန် (1) ရွှေထူး (1) လေးနက် (1) လေးဖြူ (20) အောင်ထက် (3) အောင်ဖြိုး (1) အောင်ရင် (1) အောင်လ (1) အော်ဇီလင်း (1) နိုင်းဝမ်း (6)
2NE1 (1) APINK (1) Ariana Grande (2) Avril Lavigne (2) B.O.B (1) Becky G (1) Big Sean (1) Black T (1) Bon Jovi (1) Carly Rae Jepsen (1) Cody Simpson (1) Crayon Pop (1) D.Heaven (1) Da'TRUTH (1) Dimond (1) Eminem (2) Flo Rida (1) Fun (1) Inna (3) Jae (1) Jason Marz (1) Jennifer Lopez (7) Jessie J (1) Katy Perry (2) Keyshia Cole (1) Lady Antebellum (3) Mariah Carey (1) Maroon5(2) Michael Jackson (1) Miley Cyrus (1) Nicki Minaj (4) Paran The Pace (1) Paris Hilton (1) Pink (1) Pitbull (5) PSY (2) Riff Raff (1) Royal Pirates (1) Scorpions (1) Slipknot (1) Snoop Dogg (1) SoLoZ (1) Super Junior (1) Sweet California (1) T-Pain (1) Taeyeon (1) Union J (1) Wiz Khalifa (1)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ Graphic Designer တစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်က သီချင်းတွေကိုကြိုက်လို့ ကျွန်တော့်လိုပဲ သီချင်းကြိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဒီ Blog လေးကို လုပ်ဖြစ်တာပါ။ Online မှတ်စုလေးတစ်ခုအနေနဲ့ထားချင်တဲ့သဘောပါ။ နောက်ပြီး သီချင်းခွေတွေ ၀ယ်ဖို့အခက်အခဲ ရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ အဝေးရောက် သီချင်းချစ်သူများ အဆင်ပြေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်ထားတဲ့ စာမျက်နှာလေးပါ။ မူရင်းအဆိုတော်တွေကို ထိခိုက်စေလိုတဲ့စိတ်မျိုး မရှိရပါဘူးခင်ဗျာ။ ကိုယ်တကယ် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အဆိုတော်တွေဆိုရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခွေတွေဝယ်ပြီးစုထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လဲ အနုပညာရှင်များ မနစ်နာရအောင် မူရင်းခွေဝယ်ယူအားပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ediit with by Mg Shan Lay